umshini wokupakisha irayisi othomathikhi, umshini onesisindo nomshini wokufaka
1. Zonke izingxenye zokuxhumana zenziwe nge- 304 ibanga le-stainless steelfood ku-Packer, ukugqwala ukumelana, isikhathi eside sokuphila.
2. Ukufakwa okulula kwabaqalayo, asikho isidingo sonjiniyela onekhono.
3.Umshini wokupakisha ozenzakalelayo, bamba kuphela umlomo ovulekile wesikhwama ngesandla.
4. Ukuqondanisa inzwa ephezulu ngokunemba nemitha ephezulu ehlakaniphile.
5.Ilayisi enesisindo nomshini wokupakisha onesoftware yokuzenzela, ukuchibiyela ngokuzenzakalela, i-alamu ebhala ngaphezulu, ukuhlola inkinga ngokuzenzakalela neminye imisebenzi.
Imininingwane Yomkhiqizo Womshini Wokupakisha Ilayisi Okuzenzakalelayo
Lo mshini wokupakisha irayisi othomathikhi usetshenziselwa kakhulu ukufakwa kwamanani okusanhlamvu okuzenzakalelayo,imbewu,granular, imichilo, vimba,nezinto ezenziwe nge-granular-powder,umshini onesisindo nomshini wokufaka ungapakisha izinto ezihlukile, njengelayisi,ukolweni ,ukolweni,Umuthi waseChinese granular, ikhabe-imbewu, usawoti, ukudla,Umanyolo we-organic, umanyolo wokuxubha, urea,Umanyolo weNitrogen, Umanyolo we-phosphate, Umanyolo we-potassium, ukondla,ukuwasha umshini wokupakisha we-Powderand etc.this okukhethwa kukho ongakukhetha kokuphelele isithombo selayisi imishini.
Izici zomshini wokupakisha irayisi othomathikhi
1. Umshini wokupakisha irayisi wokupakisha onamajubane amathathu wokufayila: ngokushesha, maphakathi futhi kancane.
2.Umshini wokupakisha welayisi ofanisa inzwa ephezulu kakhulu enamamitha aphezulu ahlakaniphile.Wenza umsebenzi wezinzwa ofanele, isiza ukunciphisa amaphutha wezinzwa, umshini wokupakisha othomathikhi uthuthukisa ukunemba kokulinganisa nohlelo lokulawula.
3.Ukuzilawula nokuzilinganisa ngesandla, i-microprocessor phakathi nomsebenzi wabo besebenzisa ukulungiswa okuzenzakalelayo kwesilinganiso ukunqoba ukusetshenziswa kwesikhathi eside nezinguquko zokushisa kwezemvelo ezibangelwa yiphutha.
4.Umshini wokupakisha irayisi wokufaka othomathikhi ngomsebenzi we-othomathikhi wenombolo yokupakisha nenani.
5.Umshini onesisindo wama-rice nesembozo wokumatanisa uhambelana nesoftware yakho, ukuchibiyela ukuwa ngokuzenzakalelayo, gibela ngokweqile futhi kuhlolwe inkinga ngokuzenzakalelayo.
6. Umshini wokufaka irayisi othomathikhi wokwamukela ukungenisa i-pneumatic actuator okuthembekile, ezingangcolile futhi kulula ukuba zigcinwe.
7.Ukuphakama kwepulatifomu lokuhambisa nokuhambisa isivinini okulungiswayo kwalo mshini wokupakisha welayisi othomathikhi. Ipulatifomu enguht 2.2m noma ongayikhetha engu-2.7m.
8.Ingxenye ithinta okokusetshenziswa kwensimbi engagqwali okuphephile, kuhlanzekile futhi akulula ukuguguleka nempilo yelayisi enesisindo nomshini wokupakisha yinde.
9.Isistimu yekhampasi yekhwalithi ephezulu, ukushaya izikhwama nokukhishwa kulawulwa ngohlelo lwemikhawulo.
10.Ngokuxhumana okugcwele kwenethiwekhi,umshini wokupakisha irayisi othomathikhi unekhompyutha yokusiza ngejubane eliphakeme kanye nokusebenza kokushintshana kwedatha.Igama nomsebenzi wokuxhumana wedatha.
Amapharamitha wezobuchwepheshe welayisi enesisindo nomshini wokupakisha
Amandla amakhulu:0.55kw,amandla okuthunga:0.37kw,
5–50kg / isikhwama
Isikhwama esakhiwe,isikhwama sendwangu,isikhwama sepulasitiki,isaka lesikhwama,njll
Kwenziwe ngezinto zokwakha
Ingxenye yokuxhuma ngezinto zokupakisha yenziwa 304 insimbi engagqwali
Ibeka izinto zokwakha
Okusanhlamvu,imbewu,Umanyolo,okuphakelayo,izinto zamakhemikhali,impuphu njll
Ukuthunga okuzenzakalelayo kanye nokuhambisa
Ividiyo Yomshini Wokupakisha Ilayisi
Xhumana Nathi Ngomshini Wokupakisha Ilayisi Okuzenzakalelayo